Accueil > Gazetin'ny nosy > Malagasy: Omena vary 5kg dia mitsinjaka sy mandihy
Malagasy: Omena vary 5kg dia mitsinjaka sy mandihy
Tsy ny mpangataka eny an-tsena sy eny amoron-dàlana intsony no manaonao foana noho ny fahantrana ankehitriny fa ny ankamaroan’ny Malagasy rehetra. Miseho amin’ny fomba maro isan-karazany ankehitriny ny fomba fangatahana eto Antananarivo sy amin’ny faritra maro manerana ny nosy. Efa misy mpangataka mikravaty koa marobe amin’izao any amin’ny birao any. Hatrany amin’ny fivoriana politika sy ny antenimierampirenena ary ny Antenimierandoholona dia ahitana ireny olona sahirana mangataka ireny avokoa noho ny fahantrana mihoampampana ataon’ny fanjakana amin’izao fotoana izao. Tena tonga amin’ny faniriany tokoa ny fanjakana amin’izao fotoana izao raha toa ka takarina ny tanjon’izy ireo.
Tsy ny olo-tsotra ihany nefa fa hatramin’ireo mpanao politika maro samy hafa eto amin’ny firenena dia mangataka amin’ireo mpanao politika izay mitondra amin’izao fotoana izao koa. Amin’ny fomba hafa indray ny fisehon’izany ary tena mahatsikaiky mihitsy satria misy olona maro mivelona amin’izany amin’izao fotoana izao.
Fantatry ny mpitondra fanjakana HVM sy ingahy Hery Rajaonarimampianina tsara izany ka nohararaotiny hanaovana propagandim-politika ankehitriny. Zarain’izy ireo vary ny olona any ambanivohitra amin’ny faritra sasantsasany eto Madagasikara. Lazain’izy ireo fa fanampiana sosialy avy amin’ny fanjakana izy ireny mba hangalana ny vesatrin’ny fahantrana hono. Olona misotro ronono, fikambanana olona marefo sy mahantra no jonoina amin’izany. Efa nahitana izany fizarana vary 5 kg toa izany ny tao Ambositra, Manandriana, Morondava, Vohipeno Analanjirofo, Antananarivo. Misy indray no mody atao amin’ny alalan’ny asan-tanamaro ka ampiasana manao lakandrano sy fandiovana faobe ny olona sahirana dia zaraina 3kg isan’andro ho famoronana asa hoan’ireo olona ireo hono. Ho tonga tsy ho ela indray izao ny fizarana menaka sy akoho ary vary hoan’ny mpiasampanjakana eto Antananarivo. Mandritry ny fizarana ireo vary ireo dia atao maneno be ny zavamaneno sy ny amponga ka asaina milaza ny heviny sy asaina manindrahindra ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ireo olona ireo, ka asaina miteny hoe “ ho ela fanapahana eo amin’ny fitondrana anie ny HVM sy ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina!”. Lazaina amin’izany fa mbola tsy nisy nanao toa izao hono ny fanjakana nisy teto Madagasikara hatramin’izay. Ny olona sasany aza dia milaza fa “ misaotra prezidà, fa mbola tsy nisy ny toa anao!”. Tsy vitan’izany fa sady mandihy mitotorebika izay tsy izy ireto zaraina vary 3 na 5 kg ireto. Tsy mahalala menatra intsony fa teren’ny fahantrana vokatrin’ny tsy fahaizana mitondra firenena ataon’ny fanjakana ankehitriny dia manao ny tsy fanao sy manaonao foana tanteraka.
Ankilany indray dia mibitaka izay tsy izy ireo minisitra manatrika izany ka ankalazana izay tsy izy amin’ny fahitalavitrin’ny fanjakana ny raharaha. Ny tena mampalahelo dia ny fahitana ireo be antitra ampandihizin’ity fanjakana HVM ity amin’izany fomba mamohehitra izany. Tena fanandevozana hoy ny fitenenana.
Izany indray amin’izao fotoana izao no fomba fihetsikin’ny fanjakana hambaboana ny sain’ny Malagasy. Tena politika maloto no fahitana azy. Nahoana raha natao izay hahatsara ny fiainan’ny Malagasy tao anatin’ny 4 taona nitondrana izay ka tsy fitserana miharo tetika maloto toa izao no ampiainana ny vahoaka. Marihina fa ho tonga indray ny fifidianana izay hitondra ny firenena amin’ny taona 2018 ho avy io ka hanararaotra ny fahantrana indray ny fanjakana hisintonana ny vaton’ny mpifidy. Ny Malagasy koa mora fitahina ka hadinony sahady ny asan-dahalo namongotra ny ombiny, ny doro-trano nandravana ny fananany, ny asan-jiolahy nandripaka ny harena kely mba nananany ary fanapotehana ny fianan’ny Malagasy tao anatin’izay repoblika faha efatra nitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny HVM ny firenena izay.
Raha mbola miverina mitondra ny firenena ireo dia fanandevozana amin’ny fomba vaovao indray no hataon’izy ireo.